La Kulanka Walaalaheenna Sidee Buu Inoo Caawiyaa?
Kulammadeenna kama baaqanno xitaa haddii aynu duurka lug ku marno ama xilliyada ay hawadu daran tahay. Maxay Markhaatiyaasha Yehowah ugu dadaalaan inay walaalahooda Kirishtaanka ah la kulmaan inkastoo ay dhibta noloshu haysato iyo daalka shaqada?
Wanaaggeenna buu u roon yahay. Markuu rasuulkii Bawlos yiri “midkeenba midka kale ha ka fikiro” wuxuu ka hadlayay kuwa aan kiniisadda la joogno. (Cibraaniyada 10:24) Kelmedahan wuxuu ka waday inaan si fiican isku baranno oo aan aad iskaga fekerno. Waxayna inagu guubaabiyaan inaan kuwa kale daneyno. Markaan baranno walaalaha kale oo Kirishtaanka ah waxaan ogaanaa inay qaar ka adkaadeen dhibaatooyin kuweenna la mid ah oo ay ina caawin karaan sidaan sidooda oo kale u liibaanno.
Waxaa ka asaasmo saaxiibtinnimo run ah. Kulammadeenna lama ururno dad aanan aqoon fiican u lahayn laakiin waxaan la kulannaa saaxiibbo aan ku kalsoon nahay. Mararka qaarkood waqti baan isla qaadannaa sidaan si qumman isula baashaalno. Isku imaatinkaas oo kale sidee buu inoo anfacaa? Waxaan barannaa inaan is qiimeyno oo jacaylka inaga dhexeeya baa kordho. Oo saaxiibtinnimadeenna daraaddeed baan si diyaar ah ugu gurmannaa markay dhibaato ku jiraan. (Maahmaahyadii 17:17) Markaan la kulanno mid walba oo kiniisaddayada ka mid ah waxaan muujinaynaa inaan is daneyno.—1 Korintos 12:25, 26.
Waxaan kugu talinaynaa inaad saaxiibbo la noqotid kuwa sameeyo doonista Ilaahay. Saaxiibbadaas oo kale waxaa ka dhex helaysaa Markhaatiyaasha Yehowah. Waxna yuusan kaa celin inaad nala kulantid.
Maxay inoogu fiican tahay inaan kulammada iskugu imanno?
Goormaad rabi lahayd inaad baratid kuwa kiniisaddayada ka mid ah?
Wadaag Wadaag La Kulanka Walaalaheenna Sidee Buu Inoo Caawiyaa?